HomeWararka CiyaarahaReal Madrid oo Dareenkeeda u jeedisay Aurelien Tchouameni ka dib markii ay waysay Kylian Mbappe.
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay sare u qaaday baacsiga ay ku doonayso ciyaaryahanka kooxda Monaco ee Aurelien Tchouameni kadib markii ay wayday heshiiska Kylian Mbappe.
Los Blancos ayaa si weyn loo filayay in ay si xor ah kula soo saxiixato Mbappe xagaagan, laakiin xiddiga heerka caalami ee dalka France ayaa sabtidii si cajiib ah ugu dhawaaqay inuu qalinka ku duugay heshiis cusub oo uu ku sii joogayo Paris ilaa 2025.
Real Madrid ayaa lagu eedeeyay inay hubisay inay la soo saxiixan doonto ku guulaysta Koobka Adduunka ka hor ololaha 2022-23, iyadoo mudnaanta 23 jirka ah ka sareysa Erling Braut Haaland , kaasoo hadda ogolaaday inuu Manchester City kaga soo biiro Borussia Dortmund.
Kooxda Carlo Ancelotti ayaa haatan ku qasbanaan doonta in ay raadiso meelo kale si ay u xoojiyaan weerarkooda xilli ciyaareedka soo socda, laakiin sida laga soo xigtay Marca , khadka dhexe ee cusub ayaa sidoo kale muhiim u ah kooxda.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Los Blancos ay haatan qorsheyneyso inay dardar geliso raacdada ay ugu jirto Tchouameni, maadaama ay ka cabsi qabaan inay sidoo kale weyso xiddiga reer France xagaagan
22-sano jirkaan ayaa ku riyaaqay xilli ciyaareed cajiib ah 2021-22 kooxda Monaco, isagoo u dhaliyay shan gool isla markaana diiwaan geliyay seddex caawin 50 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Ligue 1, wuxuu bixiyay seddex gool iyo labo caawin 35 kulan oo uu saftay, iyadoo kooxda maamuleysa ay ku dhameysatay kaalinta seddexaad , taasoo u sahashay inay boos ka helaan xilli ciyaareedka soo socda wareega seddexaad ee isreebreebka Champions League.
Liverpool , Chelsea iyo Manchester United ayaa sidoo kale si aad ah loola xiriirinayay ciyaaryahanka khadka dhexe, kaasoo ay ka harsan tahay wax ka yar labo sano inuu ku guuleysto qandaraaskiisa haatan.
Si kastaba ha ahaatee, Tchouameni ayaa dhawaan ku adkaystay in aanu ku degdegin in uu ka tago Monaco inkasta oo ay si weyn u hadal hayaan mustaqbalkiisa.
“Waxaan heystaa qandaraas ilaa 2024 ah, oo leh dookh ilaa 2025, waan arki doonaa waxa mustaqbalka ii ahaan doono” ayuu ciyaaryahanka khadka dhexe dhawaan u sheegay suxufiyiinta. “Waxyaabo badan ayaa ka dhici kara suuqa kala iibsiga, waxaa jira kiiskeyga iyo midka ciyaartoyda kale, kuwaasoo qaarkood uu dhamaado qandaraaskooda, islamarkaana ay damacyo kale ka qabaan meelo kale.
“Maxaad u sii joogi la’dahay Champions League? In aan ku ciribtiro Shakhtar Donetsk wareegii hordhaca ah ee xilli ciyaareedkan ayaa dhuunteyda ku dhegtay. In aan Champions League la ciyaaro Monaco ma ahan wax iga xanaaqi kara.”